रोबोट सोफिया भन्छिन्– टेक्नोलोजीको मद्दतले भोकमरी हट्छ | My News Nepal
रोबोट सोफिया भन्छिन्– टेक्नोलोजीको मद्दतले भोकमरी हट्छ
काठमाडौंत ।रोबोट सोफियाले भोकमरी, भ्रष्टाचार, लैंगिक असमानता हटाउन टेक्नोलोजीले सहजता दिने बताएकी छन् ।
युएनडीपी र नेपाल सरकारको आयोजनामा बुधबार काठमाडौंमा सोफियाले भनिन ‘मेसिन र रोबोट तपाईहरूको जीवन सहज बनाउनका लागि हो, टेक्नोलोजीको मद्दतले भोकमरी, भ्रष्टाचार, लैङ्गकि असमानताका मुद्दाहरूमा काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका नेपाल संयोजक रोनार्ड मायरले सोफियासँग जवाफ गरेका थिए । मायरले सोफियालाई बहुलाएको खण्डमा अफ गर्ने स्वीच छ भनेर सोधेका थिए । त्यसमा सोफियाको प्रतिप्रश्नमा उत्तर आएको थियो,‘मैले कन्ट्रोल गुमाएको छैन । तपाई बहुलाउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ ? स्वीच छ ?’
नेपालमा शिक्षा, मेसीनरी, ब्लक चेन टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा रोबोटको आवश्यकता देखिएको सोफियाले बताइन् । उनले नयाँ कानुन बनाएर समस्या समाधान हुनसक्ने तर्क गर्दै महिलाका अधिकार तथा कामदारका अधिकार दिगो विकासका लागि आवश्यक रहेको टिप्पणी गरिन् ।
नेपाल सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय रूपमा विविधता भएको देश भएकाले भएको आइटी सेक्टर हाइब्रिड रहेको सोफियाको टिप्पणी थियो । इन्टरनेटको सहयोगले नेपालका कुनाकुनालाई संसारसँग जोड्न सकिने बताउँदै उनले गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्न सकिने तर्क अघि सारेकी छन् । उनले नेपालको कृषि र शिक्षामा ठूलो फड्को मार्न सकिने पनि उल्लेख गरिन् ।
बम पड्काउन पाउने, लुट्न पाउने, उम्मेदवार मार्न पाउने, त्यही हुन्छ लोकतन्त्र ?
एसपी विष्टलाई साढे १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश